Homeसमाचारकाजु खानुका छन् यस्ता सोच्नै नसक्ने फाइदाहरु
October 5, 2020 admin समाचार 14861
काजुमा म्याग्ने’सियम, कपर, आइ’रन, पोटासियम लगाय’तका पोषक तत्व पाइन्छ । काजु’लाई ऊर्जा’को राम्रो स्रोत मानिन्छ ।
यस अला’वा यसमा बिभिन्न भिटामीन, क्या’ल्सियम लगायतका तत्व समेत पाइन्छ । जसले शरी’रमा अनेकौं प्रकारको ला’भ पुर्याउँछ । यस्तो छ काजु सेवन’बाट हुने फाइदाहरु :
बिना परि’श्रम थकान मह’सुस भएमा काजु’को सेवनले शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । काजुमा भिटा’मिन बी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ । युरीक एसि’डमा काजुको सेवन गर्न मि’ल्दछ, यसले युरिक एसिड फर्मेसन हुँदैन ।
निय’मित काजु खाँदा रक्तचाप निय’न्त्रित अव’स्थामा रहन्छ । निय’मित बिहान काजु खाँदा कोलेस्टे’रोलको मात्रा नि’यन्त्रित हुन्छ । काजु’को नियमित सेवनले हड्डी तथा दाँत ब’लियो बनाउँछ ।
७. काजुमा प्रोटिन’को मात्रा उच्च हुन्छ त्यसैले काजु खादाँ अ’नुहार चम्किलो हुन्छ । काजु’को लेपले अनुहा’रमा मसाज गर्ना’ले अनु’हार अझ बढी चम्किलो हुन्छ । -खबरहब बाट
मलमासको समयमा गर्दै नगर्नुहोस् यी ५ कामहरु
घर फर्कने तयारीमा रहेका एक नेपालीले कोरियामा गरे आत्मह’त्या
भो’कै बस्दा किन पेट कराउँछ ? जानुहोस्….
August 22, 2020 admin समाचार 19592
कहिले’काहिँ पेट कराएको महसुस गर्नुभएको होला । अक्सर धेरै बेर खालीपेट रहँदा वा खराब खान’पानका कारण पेट कराउने गर्दछ । मेडिकल भाषामा यसलाई बोरबो’रिग्मी भनिन्छ । अन्य कार’णभन्दा लामो समय भोको रह्यो भने तुलनात्मक रुपमा
February 12, 2021 admin समाचार 4344
विनोद खड्काको घरमा अहिले खुसी’याली छाएको छ । लामो समय देखि अस्व’स्थ्य भएकी अनिता अहिले बोल्न थालेपछि विनोद खुसी भएका हुन् । धेरै वर्ष काठमाडौको वीर अस्पतालमा उपचार गराइएकी अनितालाई अहि’ले घर लगिएको छ ।
सपनाका वकिल भन्छन्: विनयजंगलाई तत्काल पक्राउ गरेर का’रवाही गर्नुपर्छ (भिडियो सहित)
February 14, 2021 admin समाचार 3807
बीबीसीमा विश्वका श’क्तिशाली १०० महिलाका सूचीमा परेकी सपना रोकाम’गरका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अना’वश्यक टिकाटिप्पणीका बारेमा अब कानुनी प्रकृया सुरु हुने भएको छ । वेवारिसे शव ब्यवस्था’पनका लागि सकृय विनयजंग वस्नेतले सपनाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218840)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (210485)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (210175)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (208987)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (207769)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (206920)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (205388)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (205147)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194481)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (174086)